FARAN’NY TAONA : Mpampianatra efatra sy mpianatra roapolo notolorana vorontsiloza
Mba ho fampirisihana ireo mpianatra eto Toliara dia nanao hetsika ny Solombavambahoaka voafidy teto Toliara dia Siteny Randrianasoloniaiko, ny zoma hariva teo, teo amin’ny Kilisoafilira. 2 janvier 2017
Nanolotra vorontsiloza ho an’ireo mpianatra ao amin’ny kilasy fahadimy, amin’ny ambaratonga fototra, ary mpianatra ao amin’ny kilasy fahatelo kosa amin’ny ambaratonga faharoa, ary ny mpianatra amin’ny kilasy famaranana izy. Ireo mpianatra izay nahazo ny salan’isa ambony no notolorana vorontsiloza tsirairay io, ka naka roa ny avy amin’ny tsy miankina ary samy nakana roa ihany koa ny avy amin’ny Fanjakana, ka natao isaky ny Zap izany.
Tsy nohadinoiny ihany koa ireo mpanabe, ka nisy ny antsapaka natao ka mpampianatra efatra no nahazo vorontsiloza tamin’ny alalan’ny antsapaka.
Natrehin’ny Lehiben’ny Faritra Atsimo Andrefana sy ny ben’ny tanànan’i Toliara izany rehetra izany, ary notronin’ireo talem-paritra maro. Hisy ihany koa ny fianarana teny Frantsay sy angilisy ho an’ireo mpianatra nahazo naoty ambony tamin’iny fanadinam-panjakana farany teo ireny.